Ganacsade Jigjiga Kadhisay Adhabaabay Cusub - Cakaara News
Ganacsade Jigjiga Kadhisay Adhabaabay Cusub
Jigjiga(cakaaranews)Talaado, 23ka August 2016. ganacsade dhalinyaro ah oo udhashay deegaanka oo magaciisa layidhaahdo Amiir Mukhtaar islamaraana ah maalgashadaha warshada caanaha geela ee Barwaaqo ayaa Magaalada jigjiga ee xarunta DDSI kusooo biiriyay dhismaha wereega afaridoodka wadooyinka (squire building)ee wadada keelaa-harar.
Dhismahan qurux dabadan ee laga dhisay magaalada jigjiga wadada harar keelaa ayaa waxaa xadhiga kajaray Mayorka Magaalada jigjiga mudane Axmed Maxamed Axmed oo ay weheliyaan Madaxa xafiiska XDSHSI ee maamulka magaalada jigjiga.
Hadaba mayorka magaalada oo kahadlay xadhig kajarka dhismahan cusub ayaa sheegay in kaqaybgalka bulshadu uu yahay mid kamid ah siyaasada horumarineed ee Xukuumada DDSI iyo XDSHSI. Wuxuuna intaa kudaray maayarku in dhismahan uu muwaadinku dhisay uu yahay mid ka maamul ahaan ay aad ugu mahdelinayaan isagoo xusay in muwaadinkani uu deegaanka kasameeyay maalgashiyo kaladuwan oo ay kamid tahay warshada caanaha-geela ee Barwaaqo.
Sidoo kale Madaxa arrimaha XDSHSI ee maamulka magaalada Jigjiga mudane Cabdulaahi Bukhaari oo isna dhankiisa kahadlay xadhig kajarkan ayaa sheegay in dhismahani uu yahay dhismo laga dhisay badhtamaha laamida wadadawayn ee kaylaa herar islamarkaana waxwayn kusoo kordhinaysa dhanka bilicda magaalada jigjiga isagoo amaan iyo mahdcelina u soojeediyay muwaadinka dhisay dhismahan.
Wuxuuna xusay in muwaadinkani uu sameeyay Talaabo Horumarineed Oo u Baahan in Lagu Daydo. Muwadinkastana Faran inuu Kaqaybqaato Horumarka Kajira Deegaanka.